एक पाकिस्तानी माझी जसको भाग्य ब’दलिदियो एउटै माछाले…. - Nepali in Australia
July 8, 2021 autherLeaveaComment on एक पाकिस्तानी माझी जसको भाग्य ब’दलिदियो एउटै माछाले….
पाकिस्तानको बलुचिस्तान स्थित ग्वादरमा माछा मारेर जीवीकोपार्जन गर्ने एक साधारण माझीको भाग्य ब’दलिएको छ एउटै माछाको कारण । उनी रातारात लखपति हुन सफल भए । उनले माछा मा’र्ने क्रममा ४८ केजीको एक दु’र्लभ माछा फेला पारे जसले उनलाई रातारात लखपति बनाईदियो ।
सो अनौठो माछालाई ती माझीले ७३ लाख पाकिस्तानी रुपैयामा विक्री गरेका छन् ।डुंगाका मालिक अबाबकरले यो माछाको पाकिस्तानी मुल्य ८४ लाख भन्दा बढीमा लिलामी भएको तर छुट दिने परम्पराका कराण ७२ लाख मात्र हात परेको बताए ।बडी क्रोकर यो माछा युरोप र चीनमा उच्च मुल्यमा बिक्री हुने गर्दछ ।
मासुबाट भन्दा तेब्बर प्रोटिन पाइने यी ७ खानेकुरा-अमेरिकाको लोमा लिन्डा युनिभर्सिटी तथा फ्रान्सको नेसनल दा ला रिसर्च अ’ग्रोनोमिकका शोधकर्ताहरूले ८१ हजार जनामाथि एक अनुसन्धान गरे । उक्त अनसन्धानले देखाए अनुसार मासुबाट भन्दा ड्राइ फ्रुट्स तथा बी’उबिजनबाट प्राप्त हुने प्रो’टिन मुटुका लागि स्वस्थकर हुन्छ ।
मासुबाट प्राप्त हुने प्रो’टिनले मुटुरोगको ख’तरा बढाउँछ ।जसले मासुजन्य प्रोटिन बढी उपभोग गर्छन् उनीहरूलाई मुटुरो’गको ख’तरा ६० प्रतिशतसम्म बढेको पाइयो जब कि ड्राइ फ्रुट्सजन्य प्रोटिन बढी से’वन गर्नेहरूमा यो समस्या ४० प्रतिशतभन्दा कम देखियो । आखिर ड्राइ फ्रु’ट्सबाट मुटुलाई स्वस्थ राख्ने केकस्ता तत्व पाइन्छन् हेरौंः
देशी बदाम : यसमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन तथा फाइबर पाइनुका साथै क्या’ल्सियम, ए’न्टीअक्सिडेन्ट तथा भिटामिन ई समेत पाइन्छ । यसको से’वनले दाँत एवं हड्डी बलियो हुन्छ । फाइबर हुने भएकाले यो ब’दाम मुटुका लागि समेत राम्रो मानिन्छ ।
काजु : काजुलाई ड्राइ फ्रुट्सको राजा मानिन्छ । आधा मुठी काजुमा ३७४ ग्राम क्यालोरी, ३१ ग्राम चिल्लो, १६ ग्राम का’र्बोहाइड्रेट, १० ग्राम प्रोटिनका साथै पर्याप्त मात्रामा भिटामिन के तथा भिटामिन बी ६ पाइन्छ । यसबाट क्या’ल्सियम, आइरन, फोलेट तथा जिंक पनि पर्याप्त पाइन्छ ।
पेस्ता : पेस्ता स्वास्थ्यका लागि अति उत्तम खाद्यवस्तु मानिन्छ । यसमा प्रोटिनका साथै म्या’ग्नेसियम, कपर, फोस्फोरस, भिटामिन बी तथा अत्यधिक फाइबर हुन्छ । यसको सेवनले को’लेस्ट्रोल तथा हा’र्ट अ’ट्याकबाट बचाउँछ ।
ओखर : ओखरमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन, जिंक, भिटामिन ई, भिटामिन ए, फोलेट तथा फो’स्फोरस हुन्छ । यसले रगतको कोलेस्ट्रोल कम गरेर मुटुरो’ग हुनबाट जोगाउँछ । यसमा विद्यमान जिंकले इन्फेक्सन तथा भिटामिन ईले क्या’न्सरबाट बचाउँछ । यसले म’स्तिष्कको क्षमता बढाउन समेत मद्दत गर्छ भने यसको नियमित से’वनका कारण मानिस गोरो हुँदै जान्छ ।
किसमिस : किसमिसको से’वनले रक्त निर्माणमा वृद्धि हुन्छ । यसको नियमित से’वनले वायु, पित्त तथा क’फसम्बन्धी तीनै दो’षको निवारण गर्छ । यो मुटुका लागि पनि लाभदायक छ । यसमा पर्याप्त मात्रामा आइरन पाइन्छ ।एक कप किसमिसमा ५ देखि ६ ग्रामसम्म प्रोटिन हुन्छ ।
अन्जीर : अन्जिरमा प्रोटिनका साथै पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम एवं भिटामिन ए र बी पाइन्छ । यसको से’वनले क’ब्जियत, ए’निमिया, द’म, स’र्दी, कम्मरको तथा टाउकाको दु’खाइ, था’इराइड तथा पा’इल्सजस्ता रो’गमा लाभ गर्छ । यसको सेवनले शरीरमा तागत दिन्छ ।